Wasaaradda Arrimaha Gudaha oo ku dhawaaqday guddiga Farsamada ee maamul u sameynta Hiiraan iyo Sh/dhexe – STAR FM SOMALIA
Halkan ka aqriso magacyada guddiga farsamada maamul u sameynta labada gobol ee Sh/dhexe iyo Hiiraan.
1-Caasho Cabdulle Xasan (Raagto).
2-Maxamed Cali Nuur.
3-Cusmaan Barre Muxumad
4-Caa’isho Abuukar Cismaan.
5-Cabdikariin Shire Cabdi.
6-Bashiir Sh.Ibraahin Xaaji Cismaan.
7-Cusmaan Ibraahin Cali.
8-Maxamed Axmed Xasan (Ayax)
9-Cabdraxmaan Maxamed Diiriye.
10-Cabdraxmaan Faarax Xirsi.
11-Axmed Cabdraxmaan Abuukar.
12-Sh,Maxamuud Shiikh Yuusuf.
13-Cabdraxmaan Cabdi Cilmi.
14-Cabdraxiin Xaaji Fiqi.
Wararkii ugu dambeeyay ee Fatahaada Wabiga Shabeelle ee deegaano ka tirsan Sh/Dhexe(Daawo Sawirada)